घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, १४ जेठ
केही दिनअघि रुकुम पश्चिममा एउटा जघन्य अपराधको घटना भयो । घटना निकै अमानवीय, पासविक मात्र नभएर जघन्य आपराधिक नै थियो । अत्यन्त क्रूर लाग्ने उक्त घटनाको नालीबेली सुन्दा मान्छेभित्र मान्छेको वास नभएको प्रतीत हुन्छ ।
घटना ‘प्रेम’सँग सम्बन्धित थियो । एउटा २१ वर्षे जवान र १७ वर्षीया युवतीबीचको माया पिरतीको सन्दर्भ थियो । एउटा जवान किशोरले एउटी जवान किशोरीलाई वा एउटी किशोरीले एउटा जवान युवकलाई प्रेम गर्नु ‘प्राकृतिक न्याय’का दृष्टिले अवाञ्छित होइन र हुँदैन पनि ।
तर, यसका बीचमा अनेक तगारा छन्, जसले ‘प्रेम’लाई चार कुनामा बाँधेका छन् । उन्मुक्त र स्वतन्त्र विषय होइन प्रेम आज पनि हाम्रो समाजका निम्ति । हाम्रो समाजमा प्रेमका निम्ति सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, पारिवारिक अवस्था, जातीय र वर्ण व्यवस्था, आर्थिक अवस्था आदि तगारा बनेर आउने गरेका छन् ।
अझ संवेदनशील विषय त हामीकहाँ जातीय र आर्थिक अवस्था नै उन्मुक्त र स्वतन्त्र अनि हार्दिक र पवित्र प्रेमका निम्ति सबैभन्दा खतरनाक तगारा बन्ने गरेका छन् । जाजरकोट-रुकुम ‘दुर्घटना’का कारक पनि मूलतः हाम्रा सामाजिक-जातीय मान्यता वा व्यवस्था नै हुन् भन्ने आधार प्रशस्त छन् ।
घटनाअनुसार जाजरकोटका एक जना २१ वर्षे दलित वर्गका विश्वकर्मा थरका युवकको छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिमकी ठकुरी समुदायकी मल्ल थरकी १७ वर्षीया किशोरीसँग ३ वर्षअघि अचानक एउटा खेलकुद प्रतियोगितामा भेट हुन्छ । उक्त भेट विस्तारै निकट मित्रता हुँदै गहिरो प्रेममा परिणत हुन्छ ।
केटाको घरमा गएर पटक पटक किशोरी वास बस्छिन्, धेरै दिनसम्म । केटाको परिवारले आफूहरू तल्लो जात (दलित) भएको र किशोरी माथिल्लो (ठकुरी) भएका कारण आफ्नो छोरासँग विवाह हुन नसक्ने बताउँछन् किशोरीलाई । किशोरी यतिसम्म आत्मविश्वस्त हुन्छिन् कि आफ्नो भाइलाई समेत केटाको घरमा पठाएर केही दिन राख्छिन् । भाइले समेत उक्त दलित युवक आफ्नो भिनाजु भएको जिकिर गर्छ ।
गत चैतमा प्रेमिका लिन रुकुम जान्छ युवक तर दुर्भाग्य ! केटी पक्षकाको पिटाइ खान्छ, एक रात प्रहरी चौकीमा बिताउँछ र आमाको साथ लागेर घर फर्किन्छ ।
गहिरो प्रेमले कुनै जात, धर्म, वर्ग, उँच, नीच, उमेर केही भन्दैन । प्रेमका बीचमा आउने कुनै पनि प्रकारका तगाराले प्रेममा बाधा गरेको मान्दैन, ठान्दैन, महसुस गर्दैन ।
केटो र केटीबीचको प्रेम उसरी नै गाढा बनिरहन्छ- अभिभावकको असहमति, विरोध, अवरोध र कुटपिटसम्म हुँदासमेत ।
केटा पक्षबाट केटा-केटीको प्रेम सम्बन्ध टुटाउने प्रस्ताव र प्रयास हुन्छ तर असफल हुन्छ उक्त प्रयास ।
केटीले अचानक केटालाई खबर गर्छे- ‘मलाई घरमा थुनेर राखेका छन्, समूह लिएर आएर मलाई लैजाऊ ।’
केटो डेढ दर्जन साथीसहित निस्किन्छ केटी लिन- आमालाई ‘बुहारी लिन गएको’ बताएर ।
तर, नियति उल्टो भइदिन्छ- ‘बुहारी लिन’ गएको लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँ उमेरको एक मात्र छोरो हुनेवाला ‘बुहारी’कै परिवारजनबाट मारिन्छ । बुहारी त आउँदिनन् नै, छोरोको समेत लास मात्र आइपुग्छ, छोरोको लाससँगै बुहारी लिन गएका अन्य २ जनाको लास पनि । अन्य केही भेरी नदीमा बेपत्ता बन्छन् भने दर्जनजति घाइते बन्छन् ।
घटनाको नालीबेली छोटकारीमा यति हो ।
तर, उक्त घटनाले उब्जाएका प्रश्न भने अझ पेचिला र गम्भीर बनेका छन् ।
हामीकहाँ, विशेषगरी पूर्वीय सभ्यतामा परापूर्वकालदेखि सामाजिक विभेद कायम छ । मान्छेबीचमा लगाइएका जात, धर्म, वर्ग, लिंग, वर्णका पर्खाल भत्किन सकेका छैनन् बरु अझ दह्रो गरी जरा गाडेर बसेका छन् ।
वर्षौंदेखि समाजमा व्याप्त यस्ता विभेदलाई चिर्न वा यसको अन्त्य गर्न हाम्रो समाजले सकेको छैन । मानिसको कर्म र व्यवहारका कारण भनेर बनाइएका जात प्रथाको चपेटामा विभिन्न समुदायले नै अमानवीय ढंगका व्यवहार सहनुपरेको छ । मान्छेदेखि मान्छेले नै छिछि र दूरदूर भोग्नुपरेको छ ।
मान्छेमा मानवीयताभन्दा ठूलो कुरा जातीयता भएको छ । जातपातको व्यवस्थाबाट विश्वमा करोडौँ मानिस प्रताडित छन् । विगतदेखि कयौँले जातपातकै कारण दबिनु, हेपिनु, पिछडिनुपरेको मात्र छैन, कतिपयले अनाहकमा मारिनु, मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।
यसैको सिलसिला हो, जाजरकोट-रुकुम प्रकरण ।
एउटा विवाहको उमेर पुगेको युवक र किशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध हुनु अन्यथा होइन । भलै, युवतीको उमेर नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार उपयुक्त होइन । तथापि, प्रेमले कानुन पनि त हेर्दैन- जातपात, उमेर, वर्ग, लिंग आदि केही हेर्दैन भनेपछि ।
अनि उनीहरूले प्रेम गरेर बिगारेचाहिँ के ?
अर्को कुरा, दुवै परिवार अर्थात् केटा र केटीका परिवार केटा-केटीबीचको प्रेम सम्बन्धबारे राम्ररी जानकार थिए । यसो हुँदा उक्त परिवार आफ्ना ‘बालक/बालिका’प्रति सजग र सचेत हुनुपर्ने हो कि होइन ? कुटपिट र काटमारले समाधान हुने विषय थियो कि थिएन त्यो ? कुटपिट त पहिल्यै गरिसकिएको रहेछ केटामाथि । तर पनि किन आफ्नी ‘बालिका’ छोरी उक्त युवकसँग निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्धमा रहिरहिन् ?
अर्कातर्फ, नवराज विक र ती मल्ल किशोरीको प्रेम सम्बन्ध लुकेको पाटो थिएन रहेछ भन्ने प्रमाण नवराजको फेसबुक ‘नवु सरकार’मा पोस्ट गरिएका फोटो पनि हुन सक्छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा ती युवतीका अनेक फोटा राखेर ‘बेस्टु’, ‘छोटी क्विन’, ‘मुटु’, ‘मिस यु बुढी लप यु’सम्म लेखेका छन् ।
यो सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमै राखिएका फोटोको कुरा हो । र, यति हुँदाहुँदै पनि केटी र केटी पक्षकाले थाहा पाएका थिएनन् भन्नु आँखा चिम्लेर ‘खै, मैले त केही देखिनँ’ भनेजस्तै हो ।
आखिर किशोरी र युवकबीचको प्रेम प्रगाढ थियो, जुन कुनै पनि बाह्य शक्तिले छुटाउन सक्दैनथ्यो ।
यो तथ्य अभिभावकले नबुझ्नु नै उक्त जघन्य अपराधको एउटा कारक हो कि उमेर पुगेका वा किशोरावस्थामा पुगेका हरेकजसो आजका केटा-केटी एकअर्कामा आकर्षित हुन्छन् ।
आजको समय, प्रविधि, मिडिया आदि धेरै कुराले अहिलेका बालबालिका, किशोर-किशोरी, युवा-युवतीलाई पुरातन मान्यता र सोचभन्दा निकै माथि उठाएको छ । आजका किशोर-किशोरी वा नयाँ पुस्ता जात, थर, धर्म, वर्ग आदि जान्दैन ।
हजुरबा, हजुरआमाको समयका त कुरै छाडौँ, आफ्नै बुबाआमाको समयका परम्परा, मान्यता र धारणामा समेत सुधार र परिवर्तन चाहन्छ आजको पुस्ता ।
यस्तो अवस्थामा यस्ता धेरै प्रेम जोडीहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जातीय मूल्य मान्यतालाई तोड्न चाहन्छन् । भत्काउन चाहन्छन् यस्ता अमानवीय तगाराहरू । तर, यसरी अगाडि बढ्ने, बढ्न चाहने वा बढिरहेकाहरूको नियतिचाहिँ अन्ततः नवराज विककै जस्तो हुने गरेको छ कि वा समाज, परिवार र आफन्तबाट टाढिएर, हेपिएर, अपहेलित भएर बाँच्नुपरेको अवस्था छ ।
यससँगै यस घटनाले अर्को अनौठो र लाजमर्दो तथ्य उद्घाटन गरेको छ । सिद्धान्ततः र कानुनी हिसाबले नेपाली समाजमा छुवाछुत अन्त्य भएको निकै भइसकेको छ । छुवाछुत वा जातीयलगायतका सबै प्रकारका विभेद कानुनका दृष्टिमा दण्डनीय मानिएको छ ।
तथापि, व्यवहारमा यो झनै विकराल बन्दै गएको अवस्था छ । हाम्रो समाजमा वर्षौंदेखि जकडिएर रहेको जातपात र छुवाछुतको अन्त्य त के न्यूनीकरणसम्म सम्भव देखिएको छैन ।
उक्त घटनाको अर्को दुखद् पक्ष- सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षिक-आर्थिक र राजनीतिकलगायतका पक्षमा आमूल परिवर्तन र सुधारका लागि गरिएको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धको उठान भएको स्थान हो रुकुम । त्यहाँका आदिवासी, जनजाति, दलित र उत्पीडित वर्गको उत्थान र सुन्दर अनि सुखद भविष्यको सपना देखाएर सुरु गरिएको थियो सशस्त्र युद्ध ।
तर, यस घटनाले भनेको छ- तिम्रा सम्पूर्ण नारा, आश्वासन, सपना र सङ्घर्षका डिङ वाहियात ठहरिएका छन् ।
जहाँबाट आमूल परिवर्तनका लागि युद्धघोष गरियो, त्यहीँ एउटा कलकलाउँदो किशोरले प्रेमका खातिर जातीयताका कारण ज्यान गुमाएको छ । यसभन्दा लज्जास्पद र घीनलाग्दो कुरा अर्को के हुन सक्छ ? यस घटनाले ‘महान्’ भनिएको ‘जनयुद्ध’को कति नमज्जाले खिल्ली उडाएको छ ?
यससँगै हामीमा विगत केही समयदेखि रहेको अहं पनि झरेको छ, त्यो हो- १० वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र युद्धले सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक हिसाबले निकै ठूलो परिवर्तन र सुधार ल्याएको छ । यो अहंलाई तातोपानी खन्याइदिएको छ नवराज हत्या प्रकरणले । आखिर त्यस्तो केही सुधार र परिवर्तन हाम्रो समाजमा कसैले वा कुनै युद्ध र आतङ्कले ल्याएको छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । बरु तिनै सोझा सिधा गरिब, विपन्न, दलित र उत्पीडितका लासमाथि चढेर केही टाठाबाठा सत्ताको सिँढी भने अवश्य चढेका छन् ।
आखिर नेपाली समाजमा गहिरिएर बसेको (कु)संस्कार, (अ)सभ्यता उसरी नै रहेको रहेछ, कुनै सुधार वा परिवर्तन भएको रहेनछ । मान्छेलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा २० को १९ भएको रहेनछ । तब के गर्‍यौ क्रान्ति ? के गर्‍यौ परिवर्तन ? के पायो देशले ? के दियौ समाजलाई ? के पाए आमजनले ? भनेर प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ यस्ता घटनाले दिएका छन्- हिजोका ‘जनयुद्ध’का नेतृत्वमाथि ।
यस घटनासँगै उब्जिएको अर्को प्रश्न पनि छ- अनेक नाम र उद्देश्यका ती हजारौँ गैरसरकारी संस्थाले के गरेछन् यतिन्जेल ? समाज सुधारका नाममा, जातीय र लैंगिक विभेद अन्त्यका नाममा अर्बौं रुपैयाँको खोलो बगिरहेको छ वर्षौंदेखि । तर, के त्यसको उपलब्धि यही हो ? के सुधारका काम गरेछन् तिनले ?
तारे होटल, रेस्टुरेन्ट, महँगा रिसोर्टमा कुखुरा, कालिजका साँप्रा र रक्सीमा केहीलाई डुबेर/डुबाएर अनि केही सय रुपैयाँ खल्तीमा राखेर पठाइदिएका भरमा समाज सुधार हुँदैन, तल्लो तहमा रहेका मानिसको चेतनामा सुधार हुँदैन भन्ने यी एनजीओ/आइएनजीओले कहिल्यै बुझेनन्/बुझ्दैनन् ।
यस कारण पनि एनजीओ/आईएनजीओको चलखेलमा नियन्त्रण जरुरी छ भन्ने सवाल जायज छ । केही सीमित व्यक्तिको कमाउ धन्दाबाहेक नेपालको सन्दर्भमा एनजीओ/आईएनजीओको उपलब्धि देखिँदैन पनि ।
अब छिरौँ ‘अपराध’को पाटोतिर ।
उक्त घटना सरसर्ती नाङ्गा आँखाले हेर्दा, सोझो दिमागले सोच्दा र आमदृष्टिले नियाल्दा ‘अपराध’ भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । हत्या वा बलात्कार वा अपहरण वा कुटपिट स्वाभाविक रूपमै अपराध हुन् । कानुनी दृष्टिले पनि हत्या, अपहरण, बलात्कार यसै पनि अपराध, अझ जघन्य अपराध हुन् ।
यसको कानुनी प्रक्रिया, अनुसन्धान र अध्ययनको पाटो बाँकी छ र त्यो काम राज्यको जिम्मेवार निकायले, प्रभावकारी संयन्त्रले गर्ने नै छ । त्यस विषयमा पंक्तिकारको कुनै धारणा छैन ।
तथापि, एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा हेर्दा देखिने पक्षहरू यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको हो ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई मार्नु वा उसको हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो । ठूलै अपराधमा संलग्नको हत्या पनि अपराध हो । अथवा हत्या आफैँमा जभन्य अपराध हो- चाहे जुनसुकै वहानामा किन नगरिएको होस् । यस अर्थमा नवराज र अन्य २ जनाको मृत्यु प्रकरणलाई गहन गरी हेर्दा सोझा आँखाले हत्या नै देख्छ र जघन्य अपराध नै ठान्छ ।
किनभने केटाको समूह किशोरीको घरमा किशोरीकै अनुरोधमा जान्छ- किशोरीलाई ‘उद्धार’ गर्न, (उद्धार किनभने किशोरीले नै आफूलाई घरमा थुनेर राखिएकाले दलबलसहित आएर लैजानू भनेकी हुन्छे) । किशोरीकहाँ पुग्नेवित्तिकै तथानाम तल्लो स्तरका गालीसहित किशोरीकी आमाले गाउँलेसमेत बोलाएर केटाको समूहलाई लेखेट्छन्, पिट्छन् र कतिलाई घाइते बनाउँछन् भने ३ जनाको मृत्यु हुन्छ, ३ जना बेपत्ता हुन्छन् भेरी नदीमा डुबेर ।
जो मारिएका छन् वा जसको मृत्यु भएको छ, तीमध्ये केहीका शरीरमा नीलडाम देखिनुले नराम्ररी कुटपिट भएको प्रस्ट हुन्छ भने जो नदीमा हामफालेर बेपत्ता भए वा मरे, उनीहरू पनि किशोरीका परिवार र गाउँलेले लखेटेका कारण पिटाइबाट बच्न भाग्दा नदीमा हामफालेका हुन् । यसर्थ उनीहरूको मृत्युको कारण पनि किशोरीका परिवार र गाउँले नै हुन् ।
यो सामान्य आँखाले देखेको कुरा भयो, कानुनका आँखाले के देख्छ, त्यो समयको पर्खाइमा बस्नुको विकल्प छैन ।
यही घटनामा अर्को पाटोबाट पनि हेरिनुपर्छ । माथि भनियो कि समाजमा व्याप्त जातपात, छुवाछुत, उँच-नीच, धनी-गरिबका कारण यस्ता विभेद बढिरहने र यस्ता अपराध, मृत्यु र हत्या अनि बलात्कारका घटना पनि भइरहने अवस्था छ । तर, हरेक घटनामा कम्तीमा २ पाटा अवश्य हुन्छन् । तीमध्ये कुनै एउटा पाटोबाट मात्र हेर्नु पनि न्यायसङ्गत हुँदैन, यथार्थ विश्लेषण हुन सक्दैन ।
यस घटनाको अर्को पाटो सामाजिक-कानुनी पक्ष पनि हो । हाम्रो समाजमा कानुनले नै तोकिदिएको छ- विहेवारी, २० वर्षपारि । अर्थात् २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्नु कानुनी हिसाबले दण्डनीय मानिन्छ । विगतमा अबोध बालखको विवाह गरिदिने चलन थियो ।
उक्त चलन मानवीय हिसाबले, व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अपरिपक्वताका हिसाबले गलत थियो भन्ने पुष्टि भएपछि कम्तीमा मानसिक र शारीरिक रूपले पनि योग्य हुने उमेर कम्तीमा २० वर्ष मानेर विवाह २० वर्ष पुगेपछि मात्र गरिनुपर्ने अवधारणासहित कानुन बनाइयो ।
यस आधारमा हेर्दा केटो २१ वर्ष पुगेको, किशोरी भने १७ वर्षकी मात्र देखिन्छ । यो नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दण्डनीय थियो (तथापि, विवाह हुन पाएन) । केटाले यदि उक्त किशोरीलाई विवाह नै गरेर लगेका भए पनि कसैले उजुरबाजुर गरिदिएमा सजायको भागिदार हुने नै थिए ।
तर, उनीहरू पुनः किशोरी २० वर्षकी भएपछि विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्थे । कानुनी दण्ड, सजायले मृत्युदण्ड दिँदैनथ्यो । नेपालको कानुनमा मृत्युदण्डको सजाय छैन । संविधानले प्रस्टसँग मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन बनाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
अर्कातर्फ यदि २० वर्षमुनिकी किशोरीलाई उमेर पुगेको वा २० वर्ष कटेको युवकले घरमा लगेर (केटाका बाबुआमाका अनुसार केटी केटाको घरमा गएर बस्ने, केटासँगै सुत्नेसम्म गरेकी हो) १७ वर्षकी किशोरीमाथि यौन सम्पर्क गर्नु ‘ललाइइफकाई’ गरिएको बलात्कारभित्र नै पर्ला । मुलुकी अपराध संहिताले पनि भनेको छ कि १८ वर्षमुनिका किशोरीलाई उसको मञ्जुरीमै यौन सम्पर्क गरिए पनि त्यो बलात्कार ठहर्छ ।
यसो हुँदा पनि उक्त प्रकरणका अन्यान्य पाटा खुस्किँदै जान्छन् । त्यसो त यौवना किशोरी र वयस्क युवकबीचका यौन सम्बन्धलाई व्यावहारिक हिसाबले वा शारीरिक हिसाबले अन्यथा मान्नु आवश्यक भने होइन । तथापि, कानुनी र सामाजिक मान्यतालाई दृष्टिगत गर्दा भने यो पनि अपराधकै अर्को पाटो हुन सक्छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि नवराज विक वा अन्य कुनै युवक हत्याको भागिदार होइन, हुँदैन र हुनुहुँदैन । उसको अपराध पुष्टि भएमा उसलाई दण्ड, सजाय दिने अन्य कानुनी व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहले हत्या गर्नु वा आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु अझ गम्भीर अपराध हो ।
यस घटनामा अर्को सोच्नुपर्ने विषय ती किशोरीका बारेमा हो, जो भर्खर १७ वर्ष टेक्दै छन् । उनको जीवनयात्रा लामो छ । लामो जीवनयात्रामा उनको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
नहुनुपर्ने घटना भयो, जघन्य घटना भई नै सक्यो, अब ती किशोरीमा उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक भाव र धारणालाई बेलैमा उपचार गरिएन भने अर्को दुर्घटना हुन सक्नेतर्फ सम्बद्ध सबैले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
कलिलो मस्तिष्कले सोच्न सक्ने सीमित हुन्छ । परिपक्व मस्तिष्ककै लागि गाह्रो विषय हो यस्तो घटना भने ती किशोरी, जो नेपालको कानुनअनुसार ‘बालिका’ नै ठहर्छिन्, उनको मस्तिष्कले पक्कै बृहत् सोच्न सम्भव हुँदैन ।
अन्त्यमा, नहुनुपर्ने भयो, नगर्नुपर्ने गरियो । आवेश, आवेग, दम्भ, तथाकथित उँच-नीच, जात, धर्म, वर्ग आदिका अवशेषहरूको परिणाम अन्ततः हरेक समाजले भोग्ने यस्तै नियति र दुर्घटना हो । विश्वमै धेरै ठाउँमा यस्ता कुप्रथा, कुरीति, विभेदका सिकार करोडौँ मानिस बनिरहेका छन् ।
यस्तो अमानवीय, क्रूर र जघन्य प्रथा, परम्परा वा रीतिमा सुधार होइन, व्यापक र आमूल परिवर्तन नगरी अझ लामो समयसम्म मानव सभ्यतामा यस्ता व्यवस्था, अवधारणा र मान्यता कलङ्कका रूपमा रहिरहनेछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, १४ जेठ २०७७, ०७:४४:००
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख घूससहित पक्राउ
मोरङमा नदी नियन्त्रणका नाममा बाढीसँगै बग्छ लाखौँ मूल्यको बाँस